Dab ka kacay gudaha Dekedda Berbera oo Khasaare sababay
Saxaafadda oo loo diiday inay gudaha Dekedda galaan si ay Sawirro uga qaadaan dhacdadan..
Qaaca ka kacay Dekedda Berbera..
Berbera(GNA)-Dab ayaa ka kacay Gudaha Dekedda Berbera, meel sida la sheegay la dhigo Koonteenarada waaweyn oo dhawaan laga dhisay Deked yar oo loogu talo-galay Koonteenarada, goob-joogeyaal sidaa ayaa Gobanimonews u xaqiijiyey.
Sida ay dad goob-joogeyaal ahi sheegeen, dabka ayaa ka dhashay Koonteenar ay SUN ku jirtay, suntaasoo loo malaynayo ACID oo Qaac bixiyey, kaddib markii uu kulallaaday.
Dabkan ayaa sababay in ilaa shan Koonteenar oo kale uu Dabku gaadho. “illaa shan Koonteenar oo kale ayuu dabku gaadhay, laakiinse markiiba waa la bakhtiiyey” sidaas ayuu Gobanimonews u sheegay mid kamida Shaqaalaha Dekeddu.
Sidoo kale, Illaa saddex qof oo kamida dadkii ku sugnaa agagaarka goobta gubatay oo uu Qaacu gaadhay, ayaa dhaawacyo soo gaadheen, laakiinse dhaawacu waxa la sheegay inaanu ahayn mid culus.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Maamulka Dekedda iyo Hay’addaha amaanka ee Gobolka Saaxil oo la xidhiidha dhacdadan.
Ciidanka Ammaanka ee Dekedda, ayaa warbaahinta iska hortaagay inay gudaha dekeda galaan oo ay sawirro ka qaadaan gubashada dhacday.
Dekedda Berbera, ayaa bishii la soo dhaafay si rasmi ah Maamulkeeda loogu wareejiyey Shirkadda DP WORLD, taasoo maamusha dhamaan Adeegyada Dekedda, marka laga yimaado qaybta soo xidhista iyo hagida Maraakiibta oo ay Dawladdu wali maamusho.
ACID DAB Dekedda Berbera QAAC Somaliland	2017-06-18
Previous: Maxaa iska bedelay Mowqifka Cali Khaliif ee Somaliland iyo Khaatumo?
Next: Duur-xulka Ku-talo-galka ah (Constructive Ambiguity)